Shirkadda SOMGAS Oo Markii Ugu Horaysay Geeska Afrika Keentay Markab Sida Gaasta Cuntadda Lagu Karsado
Home WARARKA Shirkadda SOMGAS Oo Markii Ugu Horaysay Geeska Afrika Keentay Markab Sida Gaasta...
Berbera-(Berberanews)–Shirkadda SOMGAS ayaa markii ugu horaysa guud ahaan geeska Afrika gaar ahaana magaaladda Berbera ka hirgalisay kaydka gaaska cuntadda ee ugu wayn, waxaan maalinimadii Jimcaha si toos ah gaas ugu soo shubay markabkii ugu horeeyey ee dalka keena gaas.
Shirkadda SOMGAS ayaa kaydka Gaasta ka hirgalisay magaaladda Berbera sanadkan 2016, waxaana xarunta kaydka gaastu noqonaysaa ta ugu weyn geesk Afrika marka laga reebo terminalka magaaladda xeebeedka Mambaasa ee dalka Kenya.
Maalinimadii khamiista ayaa laga bilaabay tijaabadii ugu horaysay ee lagu shubaayey gaaska terminal SOMGAS ee magaaladda Berbera waxaana ilaa hadda socoto hawsha ku shubista gaasta cuntadda, terminal-ka shirkadda SOMGAS ee magaaladda Berbera.
Injineerka guud ee haamaha GAAS John oo ka socday shirkadda SKIDTEC ayaa ka hadlay sida uu u arko hawshan lagu guulaystay ee dhamaystirka haamaha gaas ee shirkadda SOMGAS, waxaanu yidhi, “Aad baanu ugu fursaxanay in aanu waddashaqayn la leenahay shirkadda SOMGAS, anaga oo kala shaqaynaynay in aanu samayno mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn kaydka gaaska Somaliland gudaheeda. Waxaanu sidoo kale ku faraxsanahay in aanu dhigno dhuunta gaaska ka soo qaadaysa Markabka soona dhex dhigno biyaha Somaliland”.
Shirkadda SOMGAS ayaa noqotay shirkadii ugu horaysay ee geeska Afrika ee samaysa kaydka haama Gaasta dabiiciga ah. Kaydkan ayaa la filayaa inuu wax weyn ka badali doono noqosha bulshadda Somaliland, sidoo kale uu wax weyn ka tari doono badbaadinta deegaanka oo ay fara-baas ku hayaan qawlaystayaasha dhuxusha oo gumaaday dhirtii iyo kaymihii dalku hodonka ku ahaa. Waxaanay taasi sababtay inuu dalku galo abaaro daba-dheeraaday oo galaaftay boqolaal kun oo xoolaha laf-dhabarta dhaqaalaha dalka u ah.
Kaydka haama gaaska ee SOMGAS ayaa la filayaa inay bulshadda Somaliland iyo guud ahaan deegaanadda umadda Soomaaliyeed degto inay helaan gaas jaban oo ku filnaanta, taasoo keeni doonta in bulshaddu ka maaranto dhuxushii dhirta lagu dabar-joon jiray.
Previous articleSafaarad 10 sano Magaca Maraykan ku shaqaysan jirtay oo albaabada loo laabay
Next articleDahabka daadsan Docda Gurigaaga ee aan La dareensanayn (Xogta Dahsoon)